Warbixin: Dowladda Federaalka Oo Bilaawday Qorshe Shaqada looga Eryayo Cali Cabdullaahi Cosoble Madaxweynaha HirShabelle.
Sunday August 13, 2017 - 21:32:51 in Wararka by Super Admin
Khilaaf xooggan ayaa soo kala dhaxgalay madaxda maamulka isku magacaabay Hirshabelle ee xaruntiisu tahay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelaha dhexe.
Tobaneeyo katirsanaa golaha wasiirrada HirShabelle ayaa maanta ku dhawaaqay in ay iska casileen xilalkii ay u hayeen maamulka waxayna eedeyn kulul ujeediyeen Cali Cabdullahi Cosoble hoggaamiyaha maamulkaasi.
Sidoo kale Xildhibaano katirsan Baarlamaanka HSH ayaa guddoomiyaha baarlamaanka golahaasi ugudbiyay mooshin ay ku dalbanayaan xilka qaadis degdeg ah, khilaafka u dhaxeeya maamulka Fadhigiisu yahay Jowhar ayaa sii xoogeystay kadib markii Cali Cabdullaahi Cosoble lagu eedeeyay waxqabad la’aan.
Guddoomiyaha Baarlamaanka HSH ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in uu gacanta ku dhigay mooshin ay ku saxiixanyihiin tobaneeyo xildhibaan islamarkaana maalmaha soo socda xilka qaadis lagu sameyn doono Cosoble.
Warar lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in Mooshinkan xilka qaadista ah ay gadaal ka riixayso dowladda Federaalka oo doonaysa in xilka ay ka tuurto Cosoble oo dhowr mar jeediyay erayo xiisado siyaasadeed ka abuuray Muqdisho.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa lacago uqeybiyay qaar katirsan wasiirrada Hirshabelle kuwaasi oo iscasilaad ku dhaqaaqay si ay cadaadis usaaraan Cali Cabudullaahi Cosoble, madaxweynaha Hirshabelle ayaa bilihii lasoo dhaafay shirar ka dhan ah DF-ka ku qabanayay degmada Balcad wuxuuna xilligaas ku hadaaqay in uu gogol u fidiyay shir lagu dhisayo maamul loogu magac daray ‘Banadir State’.